साताको सेयर बजार : साढे १८ अर्बको कारोबार
समाचार पुँजी बजार
शिलापत्र संवाददाता काठमाडाैं, १७ फागुन
लगातार उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार नेप्से परिसूचकले नयाँ इतिहास कायम गरेको छ । साताको ४ दिन बजार उच्च अङ्कले बढ्यो भने १ दिन सामान्य गिरावट भयो । सातामा नेप्से परिसूचक १९७.६० अङ्कले बढ्यो ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताभर कुल १८० कम्पनीका ४ करोड ४९ लाख ४४ हजार ११३ कित्ता सेयर कुल रू. १८ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख २२ हजार ४०७ मा खरिदबिक्री भए । साताको पहिलो दिन नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धि देखियो । आइतबार नेप्से झण्डै ७० अङ्कले बढ्यो । ‘बुलिस ट्रेन्ड’ देखिएको बजारमा नेप्से ६९.५६ ले वृद्धि भएर एक हजार ५०४.१४ मा पुग्यो ।
लामो समयपछि बजारमा आइतबार ‘सर्किट ब्रेक’समेत लगाउनुपर्‍यो । लगानीकर्ता ओइरिएर सेयरको माग उच्च भएपछि नेप्सेमा चर्को दबाब पर्न गयो । सोही कारण कारोबार सुरु भएको दोस्रो घण्टामा नै सर्किट ब्रेक लगाउनुपरेको थियो । सो दिन कुल १७८ कम्पनीका ८७ लाख ६९ हजार ५२२ कित्ता सेयर रू. ३ अर्ब ६० करोड ८५ लाख २६ हजार ३५४ मूल्यमा खरिदबिक्री भए ।
साताको दोस्रो दिन नेप्सेमा सामान्य गिरावट आयो । सोमबार नेप्से १.९६ ले घट्यो । नेप्से झिनो अङ्कले घटे पनि कारोबार रकम भने ३ अर्ब माथि रह्यो । सो दिन कुल १७९ कम्पनीका कुल ८३ लाख ४८ हजार २३४ कित्ता सेयर रू. ३ अर्ब ४१ करोड ५ लाख १६ हजार २७८ बराबरको कारोबार भयाे ।
सोमबार केही गतिरोध आएको बजारमा मङ्गलबार भने भारी सुधार देखियो । उक्त दिन नेप्से ४३.०२ ले बढ्यो । नेप्सेको उच्च अङ्कको वृद्धिसँगै कारोबार रकममा समेत वृद्धि भयो । कुल १८० कम्पनीका ७० लाख ५९ हजार ७१२ कित्ता सेयर रू. २ अर्ब ९९ करोड २१ लाख ६० हजार ५२४ मा खरिदबिक्री भयाे ।
नेप्से परिसूचकमा उच्च वृद्धि हुने क्रम बुधबार पनि जारी रह्यो । सो दिन नेप्से परिसूचक ५०.९३ अङ्कले बढ्यो । बुधबार कुल १८० कम्पनीका ९९ लाख छ हजार ९८९ किता सेयर रु चार अर्ब १५ करोड ४८ लाख ८३ हजारमा कारोबार भयाे ।
साताको अन्तिम दिन नेप्से ३६.०५ अङ्कले बढेर १ हजार ६३२.१७ मा पुुगेर रोकियो । नेप्सेमा भारी वृद्धि हुँदा कारोबार रकम झण्डै साढे ४ अर्ब पुग्यो । बिहीबार कुल १८० कम्पनीका १ करोड ८ लाख ५९ हजार ६५६ कित्ता सेयर रू. ४ अर्ब ४६ करोड ५ लाख ३६ हजार २५१ मा खरिदबिक्री भए । रासस
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १७, २०७६, ०५:२९:००